DRLM: Onye Nchịkwa Mgbake Ọdachi Dị Ike Maka Linux | Site na Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, GNU / Linux, Netwọk / Sava
Bọchị ndị a ebe ekele Pikico, anyị na-agagharị a ọtụtụ gburugburu ụlọ ọrụ sava nkeonweM nwere mkpa imeghe ụzọ Mgbake ọdachi ọ bụ ezie na amaara m na n'oge oge, FICO ga-abanye n'ime ọrụ a dị mkpa ma dị mkpa, ejiri m obi ike iji chee ngwaọrụ Isi mmalite oku ohuru DRLM (Disaster Iweghachite Linux Manager).
Okwesiri ighota na obu ezie na DRLM adiro na ato rue afo ato, emejuputala ya na ulo oru di iche iche, gosiputa mmejuputa iwu na NKỌ nke bụ ụlọ ọrụ 3 kachasị ukwuu na mpaghara ngwaahịa ngwaahịa ọbara na 1 na Spain.
1 Kedu ihe bụ Iweghachite Ọdachi (DR)?
2 Gịnị bụ DRLM?
3 Onye kwesiri iji DRLM?
4 DRLM Njirimara
5 Etu esi etinye DRLM
6 Anya mbụ nke DRLM
Kedu ihe bụ Iweghachite Ọdachi (DR)?
Mgbake Ọdachi ahụ o Mgbake ọdachi dị ka amaara na Spanish, ọ nwere usoro na usoro nke na-enye ohere mgbake ma ọ bụ ndozi nke teknụzụ teknụzụ (ngwaike, nkwukọrịta, netwọkụ ...) yana sistemụ dị mkpa mgbe ọdachi na-emere onwe ya ma ọ bụ njehie mmadụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe sistemụ Linux anyị mebiri ma ọ bụ ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ ma ọ bụ omume mmadụ ma ọ bụ nke okike, usoro a na-arụ ọrụ iji weghachite ozi sitere na sistemụ anyị maara dị ka Mgbake Ọdachi. Isi ihe na-akpata ọnwụ nke ọrụ taa nwere ike hụrụ na ndị na-esonụ eserese.
Iji nye nkọwa dị mkpa nke atụmatụ Iweghachite Ọdachi, anyị na-ahapụ ụfọdụ mkpụrụokwu ọnụ ọgụgụ na-enwu gbaa.
"N'ime ụlọ ọrụ ndị tara nnukwu ahụhụ data, 43% anaghị emepe ọzọ, ebe 29% mechiri mgbe afọ abụọ gachara."
"Maka ihe ọ bụla € 1 tinyere ego na atụmatụ tupu ọdachi ahụ, ọ nwere ike ịpụta ịchekwa € 4 na nzaghachi na mgbake ọ kwesịrị ime."
Gịnị bụ DRLM?
Disaster Iweghachite Linux Manager ọ bụ ngwaọrụ nke oghe emeghe, mere bash, nke na-enye anyị ohere ijikwa na-eke ma na-eweghachite Linux backups, centrally na site na netwọk. Yabụ, DRLM na-enye gị ohere ịnwe akwụkwọ nke sava anyị niile ma n'otu oge ahụ weghachite ha na ọdachi.
DRLM emeela mgbalị dị ukwuu iji tinye ọnụ ReaR (Izu Ike-na-Dịghachi) gị n'elu ikpo okwu, n'ihi ya, site na iji DRLM anyị na-adabere na nkà na ụzụ nke Nweta. Ihe DRLM na-eme bụ ịgba mbọ hụ na teknụzụ a lekwasịrị anya na ijikwa akụrụngwa buru ibu ma ọ bụ na-eto mgbe niile.
Na mkpokọta, ngwa ọrụ a dị ike na-enye anyị ọrụ niile dị mkpa iji bido nkwado ndabere Linux na nkeji nkeji. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ngwa ọrụ dị mfe iji mepụta njirisi nke oge, ebe na otu anyị kwesịrị isi mee nkwado ndabere ma weghachite ha.
Usoro dị n'ime nke DRLM rụrụ maka okike na mweghachi nke akwụkwọ nkwado nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru ezu na onyonyo ndị a.
Anyị nwere ike ịmatakwu banyere DRLM na vidiyo na-esonụ, nke otu n'ime ndị guzobere ya mere na oge nke Meghee Expo 2016.
Onye kwesiri iji DRLM?
A na-eji ngwá ọrụ a eme ihe maka onye ọ bụla nwere sava jikọọ na netwọk (ma ọ bụ njedebe dị mfe nke a ga-echedo ozi site na ya). Nke ahụ bụ, ọ bụ ezie na ụkpụrụ e kere ya iji dozie nsogbu na-emetụta nnukwu ebe data, ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ndị ọrụ njedebe nwere ike iji ya mee ka atumatu mgbake ọdachi.
Ọ bụ ngwa ọrụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ akwụkwọ, mahadum, SMEs, mmalite, gọọmentị na ndị otu niile na-eji Linux arụ ọrụ.
Ebumnuche njikwa nke etiti na Linux.
Akpaaka akụkọ site na Mail, Nagios, Zabbix ma ọ bụ HP OVO, ọ bụrụ na ọdịda na ihe okike ma ọ bụ mweghachi nke ndabere.
Nweta netwọk zuru ezu (PXE) na-enweghị mkpa maka mgbasa ozi ndị ọzọ dịka CD / DVD / USB iji malite mgbake.
Mfe njikwa site na nkewa ndị ahịa, netwọkụ na nkwado ndabere na arụmọrụ site na CLI.
Mbugharị P2V, P2P, V2P na V2V.
Otu ngwá ọrụ DR maka usoro mebere ma ọ bụ nke anụ ahụ.
Nkwado maka ọtụtụ nyiwe HW.
Nchọpụta nsogbu site na drlm CLI na akụkụ ya.
Emepụtara kpamkpam na bash.
Etu esi etinye DRLM
Nbudata ma wụnye DRLM dị mfe, ma ọ bụrụ na mbipute nke 2.0.0 (nke kachasị emelitere ugbu a), ịnwere ike iji njikọ nbudata ndị a dị ka mkpa gị si dị: tgz | zip | deb | rpm
Njikọ 2 mbụ na-akpọrọ anyị gaa na isi mmalite nke ngwa ọrụ, nke anyị ga-achịkọta ma wụnye, wee gosipụta nchịkọta ntinye .deb y .rpm enwere ike itinye ya na njikwa ihe kachasị amasị gị.
Anya mbụ nke DRLM
Ozugbo anyị wụnye DRLM, anyị nwere ike ịnweta nhọrọ ya niile site na CLI, nke anyị ga-enweta site na ịnweta mgbọrọgwụ.
Ọ ga-alaghachi ozugbo usoro nke nhọrọ anyị nwere ike ịrụ na ngwá ọrụ.
Seehụ oke nke a ga-egosirịrị iwu ọ bụla iji 'drlm COMMAND --help', ọ ga-eweghachi ihe ọmụma zuru ezu maka iwu ọ bụla.
Okwesiri ighota na DRLM na aru oru na akwukwo ndi netinye na ekwesighi iji draịva nke aru, yabụ ihe eji eme ya bu gburugburu ebe ana ejikwa nkwado ndabere na mpagharausoro iwu ziri ezi iji mee ya taa).
Ndị okike ya na-ekwu na n'iji ngwa ọrụ ha ị nwere ike weghachite nkwado ndabere Linux na nkeji 5 (Na nkwado ndabere na obere data).
Ikwubi, anyị na-akwado iji ma nwalee akụrụngwa a na gburugburu mmepe wee tinye ha na gburugburu ebe a na-emepụta ihe, ọ dị mkpa iburu n'uche na ngwaọrụ a bụ otu n'ime ụzọ ndị ọzọ nwere onwe n'efu na mpaghara mgbake ọdachi, yabụ ule na mgbasa nke Ọ dị mkpa maka ngwaọrụ ọhụụ ịpụta na mpaghara a dị mkpa.
Nwere ike ịmụtakwu banyere DRLM na drlm.org
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » DRLM: Ihe Nchịkwa Mgbake Ọdachi Dị Ike Maka Linux
Daalụ nke ukwuu maka ndetu, na-akpali mmasị. N'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ, m ga-anwa imezu ya na ụlọ ọrụ m na-arụrụ ọrụ.
Zaghachi ka ị hugo
Nke a na-adọrọ mmasị, m kwesịrị itinye ya na kọmputa m. Ọ bụ ezie na ọ dị mfe?
Enwere m ike iji kọmputa m mee nke a?
M ga-anwale ya.
Didac Oliveira dijo
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ya, lee akwụkwọ ọrụ ngo: docs.drlm.org ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nsogbu ọ bụla, egbula oge imeghe esemokwu na github.com/brainupdaters/drlm
Zaghachi Didac Oliveira
Ebe nchekwa na Autostart iji wụnye Debian, CentOS, ma ọ bụ openSUSE